Fokon' i Jodà - Wikipedia
Fokon' i Jodà
Ny fokon'i Jodà dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely. Nanana ny toerany manokana ny fokon' i Jodà amin' ny maha foko voalohany ao amin' ny Fanjakan' i Jodà azy.
1 I Jodà na Joda
2 Ny anjara tanin' ny fokon'i Jodà
3 Olona isan'ny fokon'i Jodà
I Jodà na Joda[hanova | hanova ny fango]
I Joda (hebreo: יְהוּדָה‎ / Yehuda) dia zanaka fahefatr'i Jakoba tamin'i Lea izy. Izy ilay nandresy lahatra ireo rahalahiny hivarotra an'i Josefa tamin'ireo Ismaelita mpividy olona fa tsy hamono azy (Gen. 36.26-27); izy no niantoka ny hampodiana an'i Benjamina faralahy eo amin-drainy mba hahafahana mitondra azy any Egipta araka ny sitrapon'ilay manam-pahefana egiptiana (dia i Josefa ihany). I Joda no nahazo ny tsodranon'i Jakoba ho lehiben'ireo zokiny izay tsy nanaja an-drain'izy ireo. Ireto avy ny zanak'i Jodà: Era, Onana, Sela, Pereza ary Zera (Genesisy 46.12).
Ny anjara tanin' ny fokon'i Jodà[hanova | hanova ny fango]
Ao amin'ny Bokin'i Josoa (Jos. 15) no iresahana ny anjara tany azon'ny fokon'i Joda tao Kanaana. Tsy hita ao amin'ny Hiran'i Debora ny fokon'i Jodà. Nanana ny toerany manokana ny fokon'i Joda amin'ny maha foko voalohany ao amin'ny Fanjakan'i Jodà azy, ary avy ao aminy no voalaza fa nivoahan'ireo mpanjakan'i Jodà (afa-tsy ireo mpanjaka telo farany tao Jodea (na Jodia), dia ireo Hasmoneana izay Levita). Araka ny Baiboly dia efa voalazan'ny faminaniana ao amin'ny Tsodranon'i Jakoba, izay nanambara fa tsy tokony hiala avy ao amin'i Jodà ny tehina ary ny tehim-panjakana tsy hivoaka avy eo anelanelan'ny tongony.
Olona isan'ny fokon'i Jodà[hanova | hanova ny fango]
Isan'ny fokon'i Jodà i Davida sy ireo nitaranaka azy, dia i Boaza sy i Obeda ary i Jese. Araka ny finoana jiosy dia isan'ny fokon'i Joda ny Mesia satria nampanantena ny fitohizan'ny fanapahan'i Joda ny Fanjakana ilay tsodrano. Maro ireo olona manana ny maha izy azy izay isan'ny fokon'i Jodà, ka isan'izany i Isaia, i Habakoka, i Joela (na Jôely), i Mika (na Mikea), i Obadia (na Abdiasa), i Zakaria ary i Zefania (na Sôfônia).
Taty aoriana, nandritra ny fahababoana tany Babilona, dia isan'ny fokon'i Jodà ireo mpitarika voatendrin'ny mpanjaka babilobiana hitondra ny vahoaka jiosy, torak'izany koa rehefa tapitra ny fahababoana ka isan'izany i Zorobabela (lehiben'ireo Jiosy nody tany Jodea voalohany), i Seltiela ary i Nehemia (izay isan'ireo governoran'i Jodea notendren'ny Akemenida). Tamin'ny andron'ny Romana dia voalaza ho isan'ny fokon'i Jodà ireo andriandahy (hebreo: Nasi) taorian'i Semaia, satria izy rehetra ireo dia taranak'i Hilela izay voalaza fa nateraky ny vehivavy taranak'i Davida.
↑ Ny tantaran'i Debora dia hita ao amin'ny toko faha-4 sy faha-5n'ny Bokin'ny Mpitsara. Ny toko faha-4 dia fitantarana amin'ny lahateny tsotra fa ny toko faha-5 kosa dia amin'ny endrika tonon-kalo - izay atao hoe "Hiran'i Debora" na "Antsan'i Debora".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fokon%27_i_Jodà&oldid=1037400"